Search လီးရှည် - BajarFB.com
Search Results - လီးရှည်
လီးကြီး လီးရှည် ကြာဆေး ရာသက်ပန် 14 Jan · 1.1K views
အမြိုးသား ကွီးရှညျကငျြ့ပွောငျး သှေးလညျပတျမှုလညျး အားကောငျးတဲ့အတှကျကွောငျ့ ကနျြးမာသနျစှမျးးနဖေို့ ပွောငျးဆှဲကွမယျနျော လိမျးဆေးနဲ့တှဲသုံးပေးရပါတယျ ၉လကျမဆိုဒျ ၇လကျမဆိုဒျ အားပေးလို့ရပါပွီ ☎️☎️☎️09 895957886ဆကျသှယျမှာယူနိုငျပါပွီ😍
အမြိုးသား ကွီးရှညျကငျြ့ပွောငျး သှေးလညျပတျမှုလညျး အားကောငျးတဲ့အတှကျကွောငျ့ ကနျြးမာသနျစှမျးးနဖေို့ ပွောငျးဆှဲကွမယျနျော လိမျးဆေးနဲ့တှဲသုံးပေးရပါတယျ ၉လကျမဆိုဒျ ၇လကျမဆိုဒျ အားပေးလို့ရပါပွီ ☎️☎️☎️09 895957886ဆကျသှယျမှာယူနိုငျပါပွီ😍 လီးကွီး လီးရှညျ ကွာသနျဆေး ဆေးဆိုငျ 19 Aug · 792 views
လီးကွီး လီးရှညျ ဆပျပွာတှေ ထပျရောကျပါပွီ ထိုငျးနိုငျငံ ထုတျဖွဈလို့ 10 ရကျအတှငျး ပွောငျးလဲမှုကိုခံစားရမှာပါ အရငျတဈခေါကျက မရလိုကျတဲ့သူတှေ ကိုလညျးတောငျးပနျပါတယျ🙏🏻 ထိုငျးနိုငျငံ FDA ထောကျခံခကျြပါရထားလို့ ဘေးထှကျဆိုးကြိုး မရှိကွောငျး အာမခံပါတယျ 😎 တဈခဲ 7000 အနညျဆုံးနှဈခဲယူပေးပါ 09882354161 Viber 09882354161
လီးကွီး လီးရှညျ ဆပျပွာတှေ ထပျရောကျပါပွီ ထိုငျးနိုငျငံ ထုတျဖွဈလို့ 10 ရကျအတှငျး ပွောငျးလဲမှုကိုခံစားရမှာပါ အရငျတဈခေါကျက မရလိုကျတဲ့သူတှေ ကိုလညျးတောငျးပနျပါတယျ🙏🏻 ထိုငျးနိုငျငံ FDA ထောကျခံခကျြပါရထားလို့ ဘေးထှကျဆိုးကြိုး မရှိကွောငျး အာမခံပါတယျ 😎 တဈခဲ 7000 အနညျဆုံးနှဈခဲယူပေးပါ 09882354161 Viber 09882354161 Ar Kar Phyo 23 Nov 2020
USAနိုင်ငံထုတ် FORMULA 41 2020 10 လပိုင်းထုတ် ဈေးနှုံး = 65000ကျပ်(ဖျန်းဆေးတစ်ဗူးလက်ဆောင်) ဖုန်း =09.458 928 228 ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါပြီ FORMULA 41 2020ထုပ်လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ ကဲမိတ်ဆွေတို့ရေ 🔊 ငယ်ပါ ဒုတ်သေးနေလို့ မိမိကိုယ်မိမိ ယုံကြည်မှုနည်းပါး သုတ် လွှတ် မြန်နေလို့ချစ်ဇနီး ချစ်သူတွေ မကျေနပ်ဖြစ်နေပီလား** တိုပြီး ပု နေလို့ ရှည်ရှည် ဖြစ်လာချင်သလား ? ** ပန်းသေ/ပန်းညိုး ရောဂါဖြစ်နေလို့ စိတ်ညစ်နေပါသလား USAနိုင်ငံထုတ် FORMULA 41 2020 10လပိုင်းမှထုပ်လုပ်ထားတဲ့ဆေးပါ စမ်းသုံးကြည့်ပါ .. လက်တွေ့စမ်းသပ်ပြီးသူများ အရ အနည်းဆုံး မူရင်းအရွယ်အစားထက် အရှည်၃လက်မ လုံးပတ် ၁ လက်မခွဲ တက်လာပြီး ဆက်ဆံချိန် ထူးခြား ကြာမြင့် လာတာကို ဆေးလိမ်းပြီး တစ်ပတ်အတွင်း စတင် အကျိုးထူး ခံစားလာရမှာပါ ။ 🎈 မှတ်ပုံတင်ပြီးဆေးဝါး ဖြစ်တဲ့ အတွက် ဘေးထွက်ရောဂါ ဆိုးကျိုး များ ( လုံးဝ ) မရှိကြောင်း အာမခံထားပါတယ် ဈေးနှုံး = 65000ကျပ် ဆေးအညွှန်း🔔 တစ်ညကို 1 လုံးပုံမှန်သောက်ပေးရပါမယ် 2လစာပါပါတယ် ဆေးအလုံ6း0ပါပါတယ် အခုပဲမြန်မြန်`ဖုန်းဆက် ´ပြီး ဝယ်ယူလိုက်ကြစို့ ✌✌✌ 📞 09 458 928 228📞 သို့ ဖုန်းဖြင့်သော်၎င်းviber ဖြစ်သော်၎င်း ဆက်သွယ်မေးမြန်မှာယူနိင်ပါတယ် အခြားသော မိတ်ဆွေများလည်း မြင်အောင် ဒီpost လေးကို Like&Share လုပ်ပေးသွားစေချင်ပါတယ်
USAနိုင်ငံထုတ် FORMULA 41 2020 10 လပိုင်းထုတ် ဈေးနှုံး = 65000ကျပ်(ဖျန်းဆေးတစ်ဗူးလက်ဆောင်) ဖုန်း =09.458 928 228 ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါပြီ FORMULA 41 2020ထုပ်လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ ကဲမိတ်ဆွေတို့ရေ 🔊 ငယ်ပါ ဒုတ်သေးနေလို့ မိမိကိုယ်မိမိ ယုံကြည်မှုနည်းပါး သုတ် လွှတ် မြန်နေလို့ချစ်ဇနီး ချစ်သူတွေ မကျေနပ်ဖြစ်နေပီလား** တိုပြီး ပု နေလို့ ရှည်ရှည် ဖြစ်လာချင်သလား ? ** ပန်းသေ/ပန်းညိုး ရောဂါဖြစ်နေလို့ စိတ်ညစ်နေပါသလား USAနိုင်ငံထုတ် FORMULA 41 2020 10လပိုင်းမှထုပ်လုပ်ထားတဲ့ဆေးပါ စမ်းသုံးကြည့်ပါ .. လက်တွေ့စမ်းသပ်ပြီးသူများ အရ အနည်းဆုံး မူရင်းအရွယ်အစားထက် အရှည်၃လက်မ လုံးပတ် ၁ လက်မခွဲ တက်လာပြီး ဆက်ဆံချိန် ထူးခြား ကြာမြင့် လာတာကို ဆေးလိမ်းပြီး တစ်ပတ်အတွင်း စတင် အကျိုးထူး ခံစားလာရမှာပါ ။ 🎈 မှတ်ပုံတင်ပြီးဆေးဝါး ဖြစ်တဲ့ အတွက် ဘေးထွက်ရောဂါ ဆိုးကျိုး များ ( လုံးဝ ) မရှိကြောင်း အာမခံထားပါတယ် ဈေးနှုံး = 65000ကျပ် ဆေးအညွှန်း🔔 တစ်ညကို 1 လုံးပုံမှန်သောက်ပေးရပါမယ် 2လစာပါပါတယ် ဆေးအလုံ6း0ပါပါတယ် အခုပဲမြန်မြန်`ဖုန်းဆက် ´ပြီး ဝယ်ယူလိုက်ကြစို့ ✌✌✌ 📞 09 458 928 228📞 သို့ ဖုန်းဖြင့်သော်၎င်းviber ဖြစ်သော်၎င်း ဆက်သွယ်မေးမြန်မှာယူနိင်ပါတယ် အခြားသော မိတ်ဆွေများလည်း မြင်အောင် ဒီpost လေးကို Like&Share လုပ်ပေးသွားစေချင်ပါတယ် လီးကြီး လီးရှည် ကြာဆေး ရာသက်ပန် 24 Nov · 16 views
အိမ်က မဟေသီတော့ အသဲစွဲနေပီ💥 သူမတူတဲ့ အစွမ်းတွေကို "ဘိုင်အိုမန်းနစ်" တမျိုးထဲမှာပဲ ရနိုင်တယ်✅ ဒချိဒချိလုပ်တာတော့ ဟုတ်ပါပြီ။ ကိုယ့်မှာ စံချိန်မှီလက်နက်ကြီးမရှိရင် နှစ်ယောက်လုံး အားမလိုအားမရဖြစ်တက်ပါတယ်။ အဲ့တာကြောင့် ကျုပ်တို့ရဲ့လက်နက်ကြီးကို စံချိန်မှီလာအောင် ဘာသောက်ရမလဲဆိုတာ ရှယ်ပေးလိုက်ပြီဗျာ။ အဲ့ဒါကတော့ အမျိုးသားတိုင်းသိကြတဲ့ #ဘိုင်အိုမန်းနစ် ပါပဲ...တဘူးသောက်ရုံဖြင့် နှစ်လက်မ၀န်းကျင်ဖြစ်စေပါသည်။(၁၀ရက်အတွင်းသိသာစေပါတယ်...) "ဘိုင်အိုမန်းနစ်" ရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးများ --------------------------------------- ☘တစ်ကြိမ်ပြီး တစ်ကြိမ် ဆက်ဆံနိုင်ခြင်း ☘မီးခိုးထွက်အောင် ကြာကြာဆက်ဆံနိုင်ခြင်း ☘️️ချဉ်ဆီပြည့်ဝလာပြီး အကြောများသန်မာလာခြင်း ☘️️ပန်းသေ ၊ ပန်းညှိးရောဂါများ အထူးပျောက်ကင်းစေခြင်း ☘️ဖွားဘက်တော် သေးငယ်သူများအတွက် နှစ်လက်မ၀န်း ကျင် ဖွံ့ ဖြိုး ကြီးထွား၍ ရှည်လျားလာခြင်း ( တပတ်အတွင်း ထူးခြားစေပါတယ်...နော် ) 👉 အသက် ၁၈ မှ ၆၈ အတွင်း ၁ည"တစ်"လုံး ပုံမှန် သောက်လို့ ရပါသည်။ 👉နှလုံးရောဂါ ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှိပါက, ကျောက်ကပ်ဆေးထားပါက ပုံမှန်မသောက်သင့်ပါ။ (လိုအပ်မှ သုံးရန်) 👉ဘိုင်အိုမန်းနစ် အစစ်သည်✅(၁) ဘိုင်အိုမန်းနစ် အစစ်၏ ဂျပ်ဗူး နှင့် အတွင်းဘူး၏ အရောင်များသည် အစိမ်းနုရောင်လေးများ ဖြစ်ရမည်။ (၂)ကပ်ဆူးလ်ပေါ်မှာ ဘိုင်အိုမန်းနစ် ဆိုတဲ့ အသားတံဆိပ်ပါရမည်။ (၃)အာမခံ စမတ်ကဒ် ပါရမည်။ (၄)ကျူ အာကုဒ် အသားတံဆိပ်တို့ ပါကိုပါရမည်။ ဈေးနှုန်း = 65,000ကျပ် အထူးပရိုမိုးရှင်း = စပရေး or maxman လက်ဆောင် မှာယူရန် = ☎️ 09- 44 11 00 160 ( ကောမန့် တွင် ဖုန်းနံပါတ် မထားခဲ့ပါနှင့်...ကြားဖြတ်ပြီး ဘိုင်အိုမန်းနစ် အတုတွေ ပို့ နေကြတဲ့နွားများရှိပါတယ် ) အမြန်မှာထားကြနော်...မကြာခင် ၈သောင်းဖြစ်တော့မှာဗျို့ ပို့ ခမပေးရ , ငွေကြို မလွှဲရပါ။
အိမ်က မဟေသီတော့ အသဲစွဲနေပီ💥 သူမတူတဲ့ အစွမ်းတွေကို "ဘိုင်အိုမန်းနစ်" တမျိုးထဲမှာပဲ ရနိုင်တယ်✅ ဒချိဒချိလုပ်တာတော့ ဟုတ်ပါပြီ။ ကိုယ့်မှာ စံချိန်မှီလက်နက်ကြီးမရှိရင် နှစ်ယောက်လုံး အားမလိုအားမရဖြစ်တက်ပါတယ်။ အဲ့တာကြောင့် ကျုပ်တို့ရဲ့လက်နက်ကြီးကို စံချိန်မှီလာအောင် ဘာသောက်ရမလဲဆိုတာ ရှယ်ပေးလိုက်ပြီဗျာ။ အဲ့ဒါကတော့ အမျိုးသားတိုင်းသိကြတဲ့ #ဘိုင်အိုမန်းနစ် ပါပဲ...တဘူးသောက်ရုံဖြင့် နှစ်လက်မ၀န်းကျင်ဖြစ်စေပါသည်။(၁၀ရက်အတွင်းသိသာစေပါတယ်...) "ဘိုင်အိုမန်းနစ်" ရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးများ --------------------------------------- ☘တစ်ကြိမ်ပြီး တစ်ကြိမ် ဆက်ဆံနိုင်ခြင်း ☘မီးခိုးထွက်အောင် ကြာကြာဆက်ဆံနိုင်ခြင်း ☘️️ချဉ်ဆီပြည့်ဝလာပြီး အကြောများသန်မာလာခြင်း ☘️️ပန်းသေ ၊ ပန်းညှိးရောဂါများ အထူးပျောက်ကင်းစေခြင်း ☘️ဖွားဘက်တော် သေးငယ်သူများအတွက် နှစ်လက်မ၀န်း ကျင် ဖွံ့ ဖြိုး ကြီးထွား၍ ရှည်လျားလာခြင်း ( တပတ်အတွင်း ထူးခြားစေပါတယ်...နော် ) 👉 အသက် ၁၈ မှ ၆၈ အတွင်း ၁ည"တစ်"လုံး ပုံမှန် သောက်လို့ ရပါသည်။ 👉နှလုံးရောဂါ ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှိပါက, ကျောက်ကပ်ဆေးထားပါက ပုံမှန်မသောက်သင့်ပါ။ (လိုအပ်မှ သုံးရန်) 👉ဘိုင်အိုမန်းနစ် အစစ်သည်✅(၁) ဘိုင်အိုမန်းနစ် အစစ်၏ ဂျပ်ဗူး နှင့် အတွင်းဘူး၏ အရောင်များသည် အစိမ်းနုရောင်လေးများ ဖြစ်ရမည်။ (၂)ကပ်ဆူးလ်ပေါ်မှာ ဘိုင်အိုမန်းနစ် ဆိုတဲ့ အသားတံဆိပ်ပါရမည်။ (၃)အာမခံ စမတ်ကဒ် ပါရမည်။ (၄)ကျူ အာကုဒ် အသားတံဆိပ်တို့ ပါကိုပါရမည်။ ဈေးနှုန်း = 65,000ကျပ် အထူးပရိုမိုးရှင်း = စပရေး or maxman လက်ဆောင် မှာယူရန် = ☎️ 09- 44 11 00 160 ( ကောမန့် တွင် ဖုန်းနံပါတ် မထားခဲ့ပါနှင့်...ကြားဖြတ်ပြီး ဘိုင်အိုမန်းနစ် အတုတွေ ပို့ နေကြတဲ့နွားများရှိပါတယ် ) အမြန်မှာထားကြနော်...မကြာခင် ၈သောင်းဖြစ်တော့မှာဗျို့ ပို့ ခမပေးရ , ငွေကြို မလွှဲရပါ။ လီးကြီး လီးရှည် အားဆေး 24 Dec 2019 · 6.9K views